Carlos Tevez oo ay 35-daqiiqo ku qaadatay in uu goolkiisii koobaad ka dhaliyo horyaalka Shiinaha
Thursday, January 24th, 2019 - 13:53:21
Tuesday March 07, 2017 - 10:02:39 in Wararka by Muuse Cabdi
CARLOS TEVEZ ayaan khasaare ka dhigin mushaarka qaaliga ah ee uu toddobaadkiiba ku qaadanayo £615,000, kaasoo uu kula jiro kooxda Shanghai Shenhua, waxaa uu dhaliyay kaliya 35 daqiiqo keddib markii uu saftay kulankiisii u horreeyay ee Chinese Super League.
Laacibka dalka Argentine ee weerarka ka ciyaara hadda waa 33-jir, waxaa uu ka dhaqaaqay kooxdii uu kusoo barbaaray ee Boca Juniors wuxuuna aaday horyaalka China si uu lacagta adduunka ugu badan ee ciyaartoy Mushaar u qaato halkaas uga soo shaqeysto.
Safashadiisii koobaad ee guud ahaan ciyaaruhu waxay aheyd kulankii Asian Champions League, waxaana looga badiyay 2-0 - Tevez ayaa maanka ku hayay in Chinese Super League uu cashar ka dhigi doono.
Keddib markii Giovanni Moreno uu dhaliska u billaabay kooxda Shanghai Shenhua - Tevez ayaa markaas caawiyay – ha yeeshee China kooxda ka dhisan ayaa rigoore heshay daqiiqaddii 35-aad.
Tevez ayaa qaatay oo gool u beddelay, wuxuuna diray goolhayaha kooxda Jiangsu Suning kaasoo meel qaldan ka doontay kubbadda.
Mao Jianqing ayaa dhaliyay goolka 3-aad, ka hor inta uusan Tevez sameynin Caawintiisii labaad ee kulanka, waxaana sii raacsaday Moreno oo mar kale gaaray shabaqa Shenhua – oo uu hoggaamiyo Gus Poyet - kooxda Jiangsu Suning ayaa lagu diray 4-0.
Kooxda khasaartay waxaa kulanka ugu jiray laacibkii hore ee Chelsea Ramires oo ka yimid Stamford Bridge – si waliba wax wanaagsan uma aysan aheyn Natiijadii ay halkaas kala kulmeen.
Saaxiibkiis Alex Teixeira ayaa sidoo kale ay u aheyd maalin aan la illoobin, markii khasaarahaas uu kooxda qabsaday, waxaana roose looga saaray ciyaarta dhammaadkeedii markii uu Jaallaha labaad ee kulanka qaatay.